शास्त्र अनुसार जान्नुहोस् कुन काम कुन वार गर्दा शुभ ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/शास्त्र अनुसार जान्नुहोस् कुन काम कुन वार गर्दा शुभ ?
आईतबार: आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, राजसेवा, गाइगोरु, किनबेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनि, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो वस्तुको कारोबार गर्नु धेरै शुभ हुने गर्छ।
सोमबार: यस दिन भगवान शिवको प्रिय मान्ने भएकाले पनि धेरै कार्यहरुको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। विशेष गरि गाइ, भैसी, घोडा, फूल, घाँस, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किनबेच गर्नु, महिलाको संगत गर्नु एकदम शुभ हुनेछ।
मंगलबार: भगवान गणेशको प्रिय दिन हो मंगलबार। यस दिन गणेशजीको विधिवत रुपमा पूजाआजा गरेर जुनसुकै कार्य गर्दा पनि सफलता हँसिल गर्न सकिन्छ।
बुधबार: यस दिन विशेष गरि पुण्य आर्जन गर्ने कामको सुरुवात गर्दा सफलता हँसिल गर्न सकिन्छ। साथै यस दिन वस्तु कला ,चित्रकला र अध्यानमा सोचे अनुसारको फल मिल्ने गर्छ।
बिहिबार: विहिवार विशेषगरि धार्मिक कार्यहरुको सुरुवात गर्नु उत्तम हुने गर्छ। यस दिन मन्दिर निर्माण ,मन्त्र जप ,नवग्रह पूजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेछ।
शुक्रबार: शुक्रबारको दिन गायन ,मणि , रत्न , हिरा , सुगन्ध , बस्त्र , उत्साह , अलंकार , बाणिज्य , व्यापार , गाइ९बस्तु किनबेच गर्नु , द्रव्य भण्डारण गर्नु र संचय गर्नु तथा कृषि कार्य शुभ मानिन्छ ।
शनिबार: यस दिन सुरुवात गरिएका हरेक कार्यमा शनिदेवको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। शनिबार झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह(प्रवेश), स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उत्घाटन , फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिने गर्छ ।
पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ ? खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्छ राहत
के कारण आउँछ अनुहारमा डन्डिफोर, यसरी पाउनुहोस् सधैँका लागि मुक्ति